Senatar Xuseen Sh. Maxamuud: Dalka Waa Laga Gorgortamay – Kalfadhi
Aragti Senator Warar
November 17, 2018 Kalfadhi
Wadankeena wuxuu gacanta u galayaa wadamo kale, si dadban! Golaheena Wasiirada 55% iyo ka badan waa Diapora. 45% iyo ka badan labada Gole ee Baarlamaanka ayaa la mid ah. Madaxweynaheena waa Diaspora. Duqa Muqdisho waa kaas. Hay’adaha Amniga bal fiiri. Sidoo kale, inta badan shaqaalaha mushaarka fiican qaata ee Dawladda waa Diaspora.
Markaad laba dal leedahay sidee ku kala ilaalin kartaa danaha labadaada dal? Waxaan in badan la yaabay in Xildhibaanada iyo Wasiirada laba kaarlayaasha ah ay Muqdishu kula shirayeen safaaradahooda Soomaaliya! Waxaa laga yaabaa in ay ku doodayaan in wadanka ay xirfad Iyo khibrad ku soo kordhiyeen, balse aniga waxay iila muuqataa in dano badan, oo is khilaafsan ay wadanka isku hardin doonaan sida hadaba laga yaabo inay socoto.
Sidoo kale, dhalinyarada gudaha ayaa ciriiri shaqo dareemaya, taas oo horseedi karta tahriib! Dadka haysta dhalasho laba dal Dastuurkeena waa ogol yahay, balse waxaa loo baahan yahay in la xadido, oo jagooyinka waaweyn ee dalka qofka qabanaya uu ka tanaasulo dhalashada dal kale, marka shaqadaas loo dhiibo. Arrintan waa in laga yeeshaa dood qaran, Dastuurkana uu caddeeyaa.